मिरुनालाई ‘लालपुर्जा’को आश ! | Jukson
मिरुनालाई ‘लालपुर्जा’को आश !
हङकङमा जन्मिएकी नव—नायिका मिरुना मगरले बिहीवारबाट मोफसलका हलमा प्रदर्शन सुरु भएको फिल्म ‘लालपुर्जा’मा मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेकी छिन् । फिल्ममा उनी सौगात मल्लको अपोजिटमा छिन् । १३ वर्षसम्म धरानमा बसेकी उनले यति चाँडै फिल्ममा आइएला भन्ने सोचेकी थिइनन् । हाल बेलायतमा परिवारसँग बसोबास गर्दै आइरहेकी मिरुनाले सन् २०१६ मा नेपाल आएर रंगकर्मी अनुप बरालसँग अभिनय कोर्ष सिकिन् । सानैदेखि उनको मनमा अभिनय गर्ने हुटहुटी खुब थियो । आमा शशि थापा सुब्बाले रंगकर्म र फिल्ममा लामो समय बिताएकाले त्यसैबाट आफू प्रभावित भएको मिरुनाको भनाइ छ ।
नाटक ‘कथादेश ३’ मा अभिनय गर्दै गर्दा उनीमाथी ‘लालपुर्जा’ टीमको नजर र्पयो । मिडियासँगको एक भेटमा मिरुनाले भनिन्, ‘लालपुर्जा’बाट मलाई अभिनयको अफर आएपछि मैले अडिसन दिएँ । त्यसपछि यो फिल्ममा भित्रिएकी हुँ ।’ आफ्नो डेब्यू फिल्म भएका कारण पनि मिरुनाका लागि ‘लालपुर्जा’ विशेष छ । उनी अगाडि भन्छिन्, ‘भूमिका राम्रो पाएकी छु । सायद दर्शकले पनि मन पराउनुहुन्छ ।’ परिवारबाट राम्रो सहयोग मिलेको बताउने मिरुना सुहाउँदो भूमिका पाए बेलायतबाट आएर भएपनि फिल्ममा काम गर्ने बताउँछिन् । ‘मलाई सुहाउने भूमिका हुनुपर्छ । बेलायतबाट आएर भएपनि काम गर्न तयार छु । अब फिल्मलाई निरन्तरता दिने सोच बनाएकी छु ।’ उनी भन्छिन् ।
समाजशास्त्रमा व्याचलर सकाएकी मिरुना, नायक सौगात मल्लसँग फिल्म ‘लालपुर्जा’मा काम गर्दा रमाइलो अनुभव बटुलेको सुनाउँछिन् । ‘सौगात दाईसँग काम गर्दा कहिले गाह्रो महशुस भएन । उहाँ मलाई सधै सिकाउनुहुन्थ्यो । कलाकारभन्दा पनि मलाई उहाँ साथी जस्तो लाग्छ ।’ उनले भनिन् । उनले बेलायतमा ‘वे आउट अफ माई लिग’ नामक सर्ट फिल्ममा पनि अभिनय गरेकी छिन् । मिस्टिक ड्रामा भनिएको ‘लालपूर्जा’मा दुई दाजुभाइको लालपुर्जाकै कारण उत्पन्न द्वन्द्वलाई देखाउन खोजिएको छ । ‘छड्के’ मार्फत् निर्देशनमा डेब्यु गरेका निगम श्रेष्ठको दोस्रो फिल्म ‘लालपुर्जा’मा सौगात मल्ल, विपिन कार्की, मेनुका प्रधान, मिरुना मगर, हरिहर शर्मा, कामेश्वर चौरासिया, कमलमणी नेपाल, अनिल पाण्डे लगायतका कलाकारहरु अभिनय छ । यो फिल्म भोली शुक्रवारबाट राजधानीका हलमा प्रदर्शन हुँदैछ ।
स्वयम्भूमा १९ सम्पदाको मर्मत सम्पन्न: रु पाँच करोड खर्च
‘कुटुमा कुटु’ को ५० लाख भ्यूज